Soo-saaraha Mashiinka Buuxinta Shiinaha Beer iyo Badeecad | OBeer
Nidaamyada Buuxinta waxay bixiyaan noocyo kala duwan oo otomaatig ah & buug-gacmeedka 'isobaric' (cadaadiska-cadaadiska) caagadaha biirka iyo mashiinnada qasacadaysan oo ay ku jiraan kuwa wax lagu nadiifiyo ee semi-otomaatiga wax ku oolka ah, filler & capper / monamlocks.
Khadadka buuxinta dhalada biirka
Khadadka buuxinta biirka ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa dhalada noocyo kala duwan oo dhalaalaya iyo wali cabitaanno sida biyo, khamri, khamri, kombucha, cabitaannada fudud iyo cabbitaannada kaarboonka leh.
Khadadka buuxinta waxaan ku bixin karnaa 1000BPH Line, 2000BPH Line, 3000BPH Line, 5000BPH Line, 6000BPH Line, 8000BPH Line sida ku xusan awoodaada breweriga.
1. Adoo adeegsanaya xamuulka gudbinta marinka iyo dhaqaajinta dhalada tiknoolajiyada tooska ugu xiran; silsiladihii la joojiyay iyo silsiladihii waday, tani waxay awood u siineysaa isbeddelka dhalada u eg inay fududaan karto.
2. Dhalooyinka gudbinta waxay qaataan tiknoolajiyada qoorta dhalada ah, isbadal qaab dhalo ah uma baahna inay hagaajiso heerka qalabka, kaliya isbedelka la xiriira saxanka qalooca, wheel iyo nylon qaybo ayaa ku filan.
3. Qalabka mashiinka dhalada lagu dhaqo ee birta ahama ee sida gaarka ah loo qaabeeyey waa mid adag oo waara, lama taaban karo meesha uu ku yaallo afka dhalada si looga fogaado wasakhda labaad.
4. Xawaare sare oo dheellitiran oo qulqulaya qulqulka waalka buuxiya, si dhakhso leh u buuxiya, buuxiyana sax ah oo aan dareere lahayn ayuu tufaa.
5. Hoos u dhac ku yimaada marka dhalada la soo saaro, loo beddelo qaabka dhalada looma baahna in la hagaajiyo dhererka silsiladaha wax lagu raro.
Awood(B / H) (330ml, 500ml, 720ml), 1000-8000 Dhalooyin
Cabbirka dhalada Qoorta: φ20-50mm;Dhererka:150-320mm
Xaqiijinta buuxinta ＜+ 1MM
Cadaadiska hawada 0.4Mpa
Isticmaalka hawada (m⊃3; / min) 0.3
Miisaanka(kg) Sida laga soo xigtay mashiinka buuxinta
Cabbir(L * W * H)(mm) Sida laga soo xigtay mashiinka buuxinta
Hore: Nidaamka Daaweynta Biyaha ee Khamriga
Xiga: Nidaamka Beer dhalaalaya
Mashiinka Buuxinta Yar
Mashiinka Buuxinta Buugga Buugga
Mashiinka buuxinta dhalada